•I-Child and Family Welfare icela ukufuniswa umama ka Lekana Karabo Langa kanye no Kabelo Kwazi Langa abazalwa uSibusiso Langa no Ntsilani Lekana. Onolwazi kucelwa athintane noNduduzo Sithole kule nombolo 033 342 8971 noma azifikele mathupha ema hhovisi ethu aku 224 Hoosen Haffejee Street.
•Sicela ukufuniswa umama ka-Jessica Perumal ozalwa ngomhlaka 02/01/ 2013. Ubaba wakhe ngu-Lester Perumal. Onolwazi sicela ashayele usonhlalakahle N. Khumalo, kulenombolo : 033 392 8600.
•Sicela ukufuniswa abazali baka Sboniso Hadebe. Umama wengane wayengu Veliswa Hadebe, ubaba uMthandeni. Onolwazi athinte usonhlalakahle T.A Zondi 033 392 8600
•I-Child and Family Welfare Society icela ukufuniswa ubaba ka Thabiso no Tisetso Mosisili, igama likababa wabo wuThulo Mosisili , obaziyo noma yena uqobo uyacelwa ukuthi athintane nosonhlalakahle uVuyo Ngcekwa kulenombolo: 033- 3428971 noma afike emahhovisi alenhlangano aku224 Hoosen Haffejee street.
•Sicela ukufuniswa umama wengane engu Ngubo Aphelele wase Mbali Unit 14. Igama likamama wengane nguNganele Ngubo owagcinwa ehlala Ngaphezulu onolwazi angaxhumana noosonhlalakahle uNgcobo kulenombolo 033-3928648.
•Sicela ukufuniswa umama kaShabalala Aphiwe wase Imbali Unit 14, igama likamama wengane ngu Lungelo Shabalala owagcinwa ehlala eMbali Unit 1 onolwazi angaxhumana nosonhlalakahle Ngcobo kulenombolo 033-3928648. Ubaba wengane ngu Siphamandla Mbatha wase Mbali Unit 14.
•I-Child and Family Welfare icela usufuniswa ubaba ka Boitumelo Mokoena kanye noNthateng Mokoena abazalwa uMpho Mokoena, ongasekho emhlabeni. Onolwazi kucelwa athintane noNobuhle Madlala kule nombolo 033 342 8971 noma azifikele ema hhovisi ethu ku 224 Berg Street.
•Inhlangano i-SAVF icela ukufuniswa abazali bakaSiphosethu Ndlovu (owazalwa 07/07/2018). Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-Ms C. Bleeker enombolweni ethi : 033 342 1229.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaLungelo Mgwaba.Umama wakhe uBongiwe Mgwaba ongasekho emhlabeni owayehlala Ezinketheni. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-N.P Ngubane enombolweni ethi : 033 505 0083/4.
•Sicela ukufuniswa ubaba kaThandolwethi Dlamini. Umama wakhe uZamazizi Dlamini ongasekho emhlabeni owayehlala eSongonziam. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-M.S Ntsele enombolweni ethi : 033 505 0083/4.
•Sicela ukufuniswa ubaba ka-Olwethu Thusi ongaziwa igama lakhe kanye nomama wakhe igama lakhe kungu -Asanda Thusi waseMtulwa nokuthiwa wagcina ukubonakala oZwathini. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle uNtombomzi Jutu enombolweni ethi : 033 502 2178.
•Sicela ukufuniswa umama kaBongani Ramoupa. Ubaba wakhe uKgathatso Ramoupa wase-Albert Falls. Onolwazi sicela athintane nosonhlalakahle u-A.S Mncwabe enombolweni ethi : 033 505 0083/4.